Ihe ị chọrọ ime na mgbe na a New iPhone 7 / iPhone 7S
1.6 Nzuzo na iPhone 6s (Plus)
2 iPhone 6s (Plus) Atụmatụ
2.1 Nọgidenụ iPhone 6s (Plus) Fast
2.6 Nyefee Data ka iPhone 6s (Plus)
Ihe ị chọrọ ime na mgbe na a New iPhone 6s (Plus)
Eleghị anya ị na ibu obi ụtọ banyere ọhụrụ gị iPhone 6s (Plus) na niile atụmatụ na ndị ọhụrụ Apple e kere eke na-atụ anya nwere, ọ bụ nnọọ ihe kwere nghọta. E nwere ọtụtụ ihe ndị ị ga-eme si na-aga hụ na gị na iPhone ga-arụ ọrụ na-anọgide na-arụ ọrụ n'ụzọ ziri ezi. Ke ibuotikọ emi anyị na-aga na-aga site na nke a checklist nke ihe na-eme na-enyere gị na-esi gị ọhụrụ iPhone elu na-agba ọsọ.
Ka-amalite na kasị mkpa otu.
Part 1. Mee ọ rụọ ọrụ ọhụrụ gị iPhone6s (Plus)
Part 2. nyefee gị data si ochie ekwentị ọhụrụ iPhone 6s (Plus)
Part 3. ihichapu nzuzo data si gị ochie ekwentị
Part 1. Mee ọ rụọ ọrụ ọhụrụ gị iPhone 6s (Plus)
Nzọụkwụ 1: Tupu ị malite ebighị usoro ọ bụ ezi echiche iji hụ na version nke iTunes ị nwere bụ ọhụrụ. Tụgharịa na iPhone site na-ejide ala na-ehi ụra / ike bọtịnụ na n'elu nri akuku. Ị ga-ahụ ndị na-esonụ oyiyi. Swipe mmịfe-ekpe na-amalite ebighị usoro.
Nzọụkwụ 2: Melite asụsụ na mba na nke pụrụ ịkpata ihuenyo.
Nzọụkwụ 3: Na ọzọ window, ị ga-mkpa ịhọrọ otú ị chọrọ melite iPhone. Họrọ onye na-emetụta gị.
Nzọụkwụ 4: Ị ga-ahụ-kpaliri ịbanye gị Apple ID ma ọ bụ mepụta onye ọhụrụ ma ọ bụrụ na ị na-adịghị otu.
Nzọụkwụ 5:-ekweta na usoro na ọnọdụ ma kpebizie ma ị chọrọ inwe ike Chọta My iPhone.
Nzọụkwụ 6: Kwado iCloud Eriri Ngakọ Igodo.
Nzọụkwụ 7: Kwado Siri
Nzọụkwụ 8: ikpeazụ nzọụkwụ bụ ịhọrọ ngosi mbugharị ị na-ahọrọ. Ị nwere ike ịgbanwe nke a mgbe e mesịrị na ntọala.
Ozugbo a mere, ị ga-ọma-arụ ọrụ gị iPhone.
Ọ bụ nnọọ ike ịbụ na ị ga-mkpa nyefee gị ochie ekwentị data n'ime ọhụrụ gị na ekwentị. Nke a bụ akụkụ dị mkpa nke mwube gị ọhụrụ ekwentị. Ọ dị oké mkpa na ị na-akpali gị data site na otu ekwentị ọzọ. Ị nwere ike mkpa gị ochie ozi, na ndetu, olu memos ma ọ bụ ọbụna olu Gburu. I nwere ike ime nke a na ọtụtụ ụzọ dị iche iche. Isiokwu a n'ụzọ doro anya na-akọwa ụzọ dị iche iche i nwere ike iji nyefee data ọhụrụ gị iPhone.
The ọrụ ebube software anyị na-ekwu okwu banyere bụ Wondershare SafeEraser. Nke a software mepụtara Wondershare-enyere gị aka hichapụ gị data-adịgide adịgide. The otú a na-akpọ "1-Click nzacha na mkpocha" ga-eme kpọmkwem ihe ọ na-ekwu. Ọ ga-ọcha ngwaọrụ gị na-eme ka ọ mma mma na nanị otu click. E wezụga nhicha ngwaọrụ gị Wondershare SafeEraser awade ọtụtụ ndị ọzọ nhọrọ. I nwekwara ike mpikota onu foto gị, ihichapu niile nke na-mwute, onwe data, ihichapu niile data, na ọbụna ihichapu gị ehichapụ data. Ozugbo ị na aka ihichapụ ihe site na ekwentị gị, ọ dịghị akwụsị-adịgide adịgide. Na data nwere ike natara na na bụ ya mere erasing gị ehichapụ data pụrụ ịbụ nnọọ uru.
Ugbu a na ị kpọfere niile dị oké mkpa data ọhụrụ gị iPhone, i kwesịrị ihichapu onwe data na gị ochie ekwentị. N'agbanyeghị ihe ị ga-eme gị ochie iPhone, nke a bụ nzọụkwụ dị oké mkpa na-agaghị eleghara anya. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ na-ere ma ọ bụ ịtụfu ekwentị, ọ dị mkpa na ị ihichapu niile gị onwe data gụnyere okwuntughe na ego ozi nke mere na ọ na-adịghị ada n'ime ihe ọjọọ aka.
Otu click ihichapu onye data si gị ochie iPhone
Erasing gị onwe data kwesịrị mere kpamkpam na n'okpuru nchebe ọnọdụ. Ke idaha Wondershare SafeEraser bụ ngwa maka ọrụ. Ụfọdụ n'ime atụmatụ na-eme SafeEraser kemgwucha irè na-agụnye;
Ọ na-ekwe ka ị na-na-adịgide adịgide hichapụ ihe niile gị onwe data gụnyere ozi ịntanetị, ichekwa ego na bank ọmụma na logins iji hụ na ha na-unrecoverable
Ọ nwekwara ike ekwe ka ị na-adịgide adịgide wepụ ehichapụ faịlụ site na ekwentị gị
Ị nwere ike iji Nchekwa nchicha ka na-adịgide adịgide ihichapu ihe niile na ngwaọrụ
A bụ otú iji Wondershare Nchekwa nchicha ka kpamkpam ihichapu onwe data.
Nzọụkwụ otu: download na wụnye Wondershare Nchekwa nchicha gị PC. Na-agba ọsọ usoro ihe omume na jikọọ na gị ochie iPhone ka usoro ihe omume. Ke ufọk window, Pịa ihichapu Private Data.
Nzọụkwụ abụọ: The omume amalite iṅomi ma nyochaa data na kọmputa gị.
Nzọụkwụ atọ: Mgbe iṅomi zuru ezu, niile gị onwe data ga-egosipụta na edemede. Ego n'igbe ndị data ị ga-achọ ehichapu ya. Pịa na ihichapu Ugbu a ka ihichapụ data.
Nzọụkwụ anọ: ị ga-achọrọ pịnye okwu "Hichapụ" iji kwado nhichapụ. Pịa ihichapu Ugbu a ọzọ mgbe unu meworo na.
Usoro ihe omume ga-akwado na data e ehichapụ.
Otu click ihichapu onye data si gị ochie Android ekwentị
Ị nwekwara ike ahu nagide Wondershare MobileTrans ihichapu onwe data. A bụ ihe ọzọ ngwa nwere abịa kemfe mgbe ị chọrọ ihichapu onwe data. Ụfọdụ n'ime atụmatụ na ị nwere ike ịhụ uru na a ngwa-agụnye;
Ị nwere ike iji MobileTrans nyefee data dị ka ozi ederede, oku na ndekọ, photos, kalenda, na music site na otu ekwentị ọzọ.
Ị nwere ike otú iji ya nkwado ndabere na mpaghara weghachite iPhone mfe
Na-enyere gị aka ịnọgide na ekwentị gị data nwetara ọbụna dị ka ị nyefee
Enyere gị aka na-adịgide adịgide ihichapu gị ochie ekwentị
A bụ otú ihichapu ekwentị gị n'iji Wondershare MobileTrans.
Nzọụkwụ 1: Gbaa Wondershare MobileTrans na jikọọ na gị ochie ekwentị gị na kọmputa na iji USB cables. Ke akpan window pịa "Ihichapu gị Old ekwentị."
Nzọụkwụ 2: na ala n'akụkụ aka ekpe, pịa ihichapu Ugbu a. A popup igbe ga-apụta. Gụọ ihe ndị na Atụmatụ na-abanye na "Hichapụ" ke nyere igbe. Wee pịa "Malite" ihichapu niile nke gị data.
Jiri iPhone dị ka a nche igwefoto
> Resource> iPhone> Ihe ị Mkpa na-eme Mgbe Inweta a New iPhone 6s (Plus)